Taliska Amisom oo sheegay in 98 ka mid ah Xoogaga Shabaab ay ku dileen Gobolka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Qaybta Afaraad Ee Ciidanka Midowga Afrika, Korneyl C/raxmaan Cabdi Dhimbil, ayaa sheegay hawlgalada toddobadii cisho ee la soo dhaafay inay ku dileen 98 ka mid ah Xoogaga Ururka Al Shabaab.
Taliyaha, ayaa sheegay Ciidamada Dowladda iyo Amisom inay u istaageen, sidii Ururka Al Shabaab looga wada sifayn lahaa Gobolka Hiiraan, isla-markaana intii ay hawlgalada socdeen looga gaaray guulo muhiim ah.
Taliyaha waxa uu xaqiijiyay Ururka Al Shabaab inay kala wareegen Deegaano ay ka mid yihiin Buq Qoosaar, Ceel Cali, Ceel Idaad iyo Halgan, isagoo intaa ku daray in hawlgaladu ka duwanaan doonaan kuwii hore.
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayaa wuxuu ku cago jugleeyay inaanan Shabaabka looga hari doonin, haddii ay ku soo laabtaan wadooyinka soo gala dhulka laga saaraayo. Wuxuu hadalkiisu u muuqday in laga hortaggi doono go’doomin lagu sameeyo dhulkaasi.
Korneyl Dhimbil oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa hoosta ka xariiqay in Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ay taggi doonaan dhulka miyiga ah ee Shabaabku ka jooggaan Gobolkaasi.
Dhanka kale Taliyaha Ciidanka Jabuuti Ee Gobolka Hiiraan, Korneyl Maxamed Cilmi Habane, ayaa qiray in iska caabin xoogan ay kala kulmeen Shabaabka, mudada toddobaadka ihi ay dhaq dhaqaaqyada ka wadaan Gobolka.
Taliyaha Habane oo sidoo kale la hadlay VOA, ayaa ku waramaaya in dagaalka ugu culus ay kala kulmeen Shabaabkii Deegaanka Nuur Fanax, isla-markaana ay dagaalkaasi ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka Amisom.
Taliyaha waxa uu dadka reer Hiiraan uu kaga digay inaysan qarin Xoogaga Shabaabka ka tirsan, isagoo xusay in marar badan ay dhacday in dadku ay raggaasi u qariyaan reer hebel ahaan, sida uu yiri.